Mitambo yeBhodi Yemhuri Yese
Iyo Yakanakisa Bhodhi Mitambo Yekutamba
Kusava nechokuita nemhuri yako kunogona kunetesa. Kana kuchinaya uye zvirongwa zvako nemhuri yako zvikaparara unonzwa kuora moyo asi chinotsiva icho zvirongwa zvakaparadzwa zvinogona kunge zviri zvekutamba mitambo yemabhodhi nemhuri yako. Kune zviuru zvavo uye akawanda marudzi okusarudza kubva. Iwe unogona kutenga chero cheizvi chaizvo chero kupi nekuti ivo vese vanozivikanwa kwazvo. Mushure mekuverenga chinyorwa ichi zvizere uchanzwa uchimanikidzwa kutanga kutamba mitambo yemabhodhi nemhuri yako. Iwe uchadzidza kuti nei iri zano rakanaka uyezve kuti ndezvipi zvinonyanya kunakidza kumhuri yese. Tora mamwe mapopika kana zvimwe zvinwiwa uye uzorore uye unakirwe nechinyorwa.
Kana usati wambonzwa nezve zvekare senge chindingindingi ipapo unofanira kunge uchigara pasi pedombo rinorema kwazvo. Monopoly anga aripo kwemazera uye anoenderera kuve imwe yemitambo yepamusoro yebhodhi iwe yaunogona kutenga. Mutambo webhodhi uyo chero mhuri inonakidzwa nekutamba. Mumutambo weMonopoly, unokwikwidza zvakanyanya nekuti unoedza kudzora zvese zvivakwa kuti mumwe abhadhare rendi yaungakwidze. Mutambo uyu unoshandisawo akakosha makadhi anowedzera mari yako kana ivo vanogona zvakare kukumisikidza kumashure zvichienderana nekadhi. Kana iwe uri kuyedza kutamba mutambo uyo unoshandisa yakawanda brainpower saka iwe unofanirwa kuyedza kutamba Scrabble. Scrabble inogona kubatsira vechidiki kudzidza kuperetera sezvo yakavakirwa pakatenderedza mazwi ekuperetera. Imwe yechinyakare ndeye mutambo wehupenyu. Mumutambo uyu, unotanga itsva hupenyu nechero ani wauri kutamba naye. Kweawa iwe unogona kuchinja yako yekunyepedzera upenyu uye zvinonakidza kumhuri yese.
Zvakawanda Kupfuura Bhodhi Mutambo
Izvi zvese zvinopfuura zvakapusa bhodhi nekuti zvinoburitsa mhuri yese uye imi vakomana munogona kutanga kubatana. Iva nevaviri vavo kuitira kana imi muchizofinhwa kana mumwe munhu akaramba achikunda uye zvobva zvasarongeka. Tora zvekudya zvekudya kana pamwe kutotenga chikafu senge pizza yevana. Mushure mezvose, kutamba bhodhi mitambo nemhuri dzimwe nguva kungave kuri nani pane kuenda kunze. Izvo zvinobatsirawo kuchengetedza mari nekuda kweiyo yakapusa chokwadi chekuti hausi kuzoenda kunoshandisa mazana kuDisneyland mazuva ese. Tarisa uone mamiriro emhuri anotamba bhodhi mutambo pamwe pamwe nemhuri iyo ingori pamafoni avo uye mapiritsi. Iyo mitambo yebhodhi inogona kuva nezvakawanda zvinobatsira kupfuura iwe zvaunofunga. pano chinongedzo kumablog mablog anoenda zvakadzama nezve izvi. Tora sekondi kuti uverenge pamusoro kuti uzive nezve zvinobatsira.
Wiricheya Vashandisi uye Bowling Equipment